नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अमेरिकाका धेरै जसो राज्यमा शताब्दिकै सबैभन्दा चिसो ! हजारौ हवाइ उडान रद्ध, बस, रेल सेवा प्रभाबित, यात्रुको बिचल्ली, समुन्द्रको पानी समेत जम्न थाल्यो हेर्नुस भिडियोहरु नेपाल मदर डट कममा ! वाशिङ्टन डिसी, भर्जिनिया र म्यारिल्याण्डमा चिसो भए पनि खतरनाक अवस्था छैन !
अमेरिकाका धेरै जसो राज्यमा शताब्दिकै सबैभन्दा चिसो ! हजारौ हवाइ उडान रद्ध, बस, रेल सेवा प्रभाबित, यात्रुको बिचल्ली, समुन्द्रको पानी समेत जम्न थाल्यो हेर्नुस भिडियोहरु नेपाल मदर डट कममा ! वाशिङ्टन डिसी, भर्जिनिया र म्यारिल्याण्डमा चिसो भए पनि खतरनाक अवस्था छैन !